Latest News || Grace fm MHz 107.6
असार १३, काठमाडौँ । अन्तिम खेलमा जीत निकाल्दै अर्जेन्टिना नकआउट चरणमा पुुगेको छ । यो खेलअघिसम्म समूहको अन्तिममा रहेको अर्जेन्टिनाले नाइजेरियालाई २–१ ले पराजित गर्दै उपविजेताका रुपमा अघिल्लो चरणमा पुुगेको हो । अर्जेन्टिनाको जीतमा कप्तान लियो मेसी र मार्को रोजोले गोल
विश्वकपमा आज तीन खेल, कहाँ कुन बेला ?
असार ३ , काठमाडौं । विश्वकप फुटबल अन्तर्गत आइतबार तीनवटा खेल हुँदैछ । पहिलो खेलमा समूह ई मा रहेको कोस्टारिकाले सर्बियासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । यो खेल नेपाली समय अनुसार बेलुका पौने ६ बजे समारामा रहेको समारा एरिनामा हुनेछ । यस्तै दोस्रो खेलमा
रियलको प्रशिक्षकमा लोपेटेगी नियुक्त
जेठ ३०, २०७५ । रियल म्याड्रिडले स्पेनिस राष्ट्रिय टिमका प्रशिक्षक जुलेन लोपेटेगीलाई आगामी तीन वर्षका लागि मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गरेको छ। रियललाई लगातार तीन सिजन च्याम्पियन्स लिगको उपाधि दिलाएका प्रशिक्षक जिनेदिन जिदानले केही साताअघि राजीनामा दिंदै क्लबलाई नयाँ रणनीति आवश्यक
जेठ ३०, २०७५ | भक्तपुर – प्रदेश नं ३ को स्थायी राजधानी निर्धारण गर्न गठन भएको प्रदेश राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन समितिले प्रदेशको राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने क्रममा म‌ंगलबार भक्तपुर जिल्लाको स्थलगत अध्ययन गरेको छ । प्रदेशको राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समितिको
भक्तपुरको नलिञ्चोकमा ठक्कर दिने टिपरका सवारी चालक पक्राउ
जेठ १०, भक्तपुर । अरनिको राजमार्गअन्तर्गत भक्तपुरको नलिञ्चोक नजिकै सडकमा बुधबार स्कुटरलाई ठक्कर दिने टिपर चालकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक एवं सूचना अधिकारी कृष्ण प्रसाईंका अनुसार धादिङ थाक्रे घर भई हाल थानकोटमा बस्ने ३० वर्षीय सञ्जीव
प्रदेशः ३ का प्रदेश सदस्य हरिशरण लामिछानेको निधन
वैशाख ३१, भक्तपुर । प्रदेश नं ३ का प्रदेशसभा सदस्य हरिशरण लामिछानेको निधन भएको छ । मष्तिस्काघात (ब्रेन ह्यामरेज) भएपछि सिनामंगस्थित काठमाडौँ मेडिकल कलेज (केएमसी)मा उपचारत उहाँको आज विहान १ बजे निधन भएको पारिवारिक स्रोतले बताएको छ । रारा क्षेत्रको
वर्षाले रामेछापको मन्थली अस्तव्यस्तः विद्यार्थी बगे, बाटो बन्द, बजार डुबानमा
३१ वैशाख, रामेछाप । रामेछापमा अविरल वर्षापछि आएको बाढीले बगाउँदा परीक्षा दिन गएका विद्यार्थी बगाएको छ भने मन्थली बजारलगायतका स्थानहरु अस्तव्यस्त बनेको छ । मन्थली नगरपालिकाको भटौलीमा रहेको रुद्राक्षेश्वर मावि केन्द्रमा परीक्षा दिन जान लागेकी मन्थली माविकी उस्मा फुँयाललाई खोलाले बगाएर
आज र भोलि देशभर मौसममा बदली
वैशाख ३०, काठमाडौं– पूर्वमा बनेकाे न्यूनचापीय प्रणाली तथा पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण आज बिहानैदेखि उपत्यकालगायत धेरै ठाउँको मौसम बदली भएको छ। यसको प्रभावले आज र भोलि देशभरीकै मौसम बदली भई केही ठाउँमा पानी पर्ने संभावना रहेको मौसमविद् सुवास रिमालले बताउनुभयो ।
आईपीएलको डेब्यूमै सन्दिपले लिए विकेट
वैशाख ३० , काठमाडौं । नेपालका सन्दिप लामिछानेले आईपीएलको डेब्यू खेलमा विकेट लिएका छन् । दिल्ली डियरडेभिल्समा आवद्ध उनले शनिबार रोयल च्योलेन्जर्स बैंग्लोरविरुद्ध डेब्यू गरेका थिए । तर, उनको टिम बैंग्लोरसँग ५ विकेटले पराजित भएको छ र प्रतियोगिताको समूह चरणबाटै बाहिरिएको छ ।
राष्ट्रप्रमुखको उपस्थितिमा आज रातो मत्स्येन्द्रनाथको भोटो देखाईंदै
काठमाडौं, बैशाख ३० । बर्षा र सहकालका देवताका रुपमा पुजिने रातो मत्स्येन्द्रनाथको भोटो देखाउने जात्रा आज हुंदैछ । ललितपुरको जावालाखेलमा आयोजना गरिने जात्राको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अवलोकन गर्नेछिन् । भोटो देखाउने जात्राका लागि मत्स्येन्द्रनाथको रथलाई लगनखेलस्थित थटिटोलबाट तानेर जावलाखेल पु‍र्‍याइएको छ
प्युठानमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना, ५ जनाको मृत्यु, २५ घाइते
प्युठान, बैशाख ३० । प्यूठानको बडडाँडामा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा ५ जनाको मृत्यु भएको छ भने २५ जना घाइते भएका छन् । महेन्द्रनगरबाट प्यूठानको खलंगातर्फ जाँदै गरेको महाकाली यातायातको ना४ख १८७६ नम्बरको बस आज बिहान प्यूठानको सरुमहारानी गाउँपालिकामा बडडाँडा नजिकै दुर्घटना
निजी विद्यालयले ड्रेस र किताब बेच्न नपाउने, चर्को शुल्क फिर्ता गर्ने सहमति, विद्यार्थीको आन्दोलन फिर्ता
वैशाख २३, काठमाडौं । निजी विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीहरुलाई पोशाक, पाठ्यपुस्तक र झोला बिक्री वितरण गर्न नपाउने भएका छन् । विद्यार्थीका अभिभावकबाट लिइँदै आएको चर्को शुल्क पनि फिर्ता गर्नुपर्ने छ । विद्यार्थीले चर्को शुल्क वृद्धि फिर्ताको मुख्य मुद्दा उठाउँदै आन्दोलन गर्दै
बजेट अधिवेशन आजबाट, ४ अध्यादेश पेश गर्ने तयारी
वैशाख २३, काठमाडौं । संघीय संसद (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) को दोस्रो अधिवेशन आजदेखि शुरु हुँदैछ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आह्वानमा संघीय संसदको दोस्रो अधिवेशन शुरु हुन लागेको हो । यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय संसदको बैठक आह्वानका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस
२२ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रमान कर्माचार्यसहित ५ पदाधिकारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध गरेको अभियोगमा अपराध महाशाखाको टोलीले शनिबार साँझ उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो । कर्माचार्य आन्दोलन मूल समितिको संयोजक पनि हुन्
वैशाख २२, काठमाडौं । सरकारले सिन्डिकेट व्यवस्था खारेजपछि आन्दोलनमा उत्रिएका यातायात व्यवसायीले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् । शनिबार यातायात व्यवसायी महासंघ आन्दोलन मूल समितिका संयोजक योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले एक विज्ञप्ति निकाल्दै आन्दोलन फिर्ता भएको घोषणा गरेका हुन् । व्यवसायीले शनिबारदेखि देशभर नै सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायात
वैशाख २१, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले विवादकाबीच पार्टी पदाधिकारी नियुक्त गर्नुभएको छ । देउवाले उपसभापतिमा विमलेन्द्र निधि, महामन्त्रीमा पूर्णबहादुर खड्का र सह–महामन्त्रीमा डाक्टर प्रकाशशरण महतलाई मनोनित गर्नुभएको हो । तर देउवाले एकलौटी रुपमा पदाधिकारी मनोनयन गरेको भन्दै रामचन्द्र पौडेल
सेवा रोक्नेको रुट परमिट खारेजी शुरु, २६ माइक्रोका इजाजत रद्द
वैशाख २१, काठमाडौं । सरकारले इतिहासमै पहिलोपटक हड्तालमा उत्रिएका सार्वजनिक सवारीको रुट परमिट खारेज गरेको छ । यसअघि रुट इजाजत विपरित सञ्चालन हुने ठगी गर्ने सवारीले रुट निलम्बन गरिए पनि हड्ताल गरेबापत कुनैपनि सवारीको रुट इजाजत खारेज भएको थिएन । यातायात
२१ वैशाख, बुटवल । सिण्डिकेट माग गर्दै यातायात बन्द गरेका यातायात व्यवसायीलाई सरकारले पक्राउ गर्न थालेको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको निर्देशनपछि बुटवलमा पश्चिम नेपाल बस ब्यवसायी संघका उपाध्यक्ष र महासचिव पक्राउ परेका छन् । यातायात क्षेत्रमा हड्ताल गरेर कानून
वैशाख २१, काठमाडौं । सिण्डिकेटवाला यातायात व्यवसायीहरुले थालेको यातायात बन्दको आन्दोलनको प्रभाव बिहान नै देशैभरि देखिएको छ । आज बिहान काठमाडौं लगायत देशका विभिन्न शहरमा भाडाका सवारी साधनहरु न्यूनमात्रामा देखिएका छन् । केही शहरमा भने सडक सुनसानजस्तै देखिएको छ ।
वैशाख १९, काठमाडौं । केही महिनादेखि चर्चामा रहेको ३३ केजी सुन प्रकरणमा मुख्य अभियुक्त चुडामणि उप्रेती ‘गोरे’लाई बनाएर पूर्व डिआइजी, बहालवाला एसएसपी, एसपी र डिएसपीसहित ६३ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत मोरङमा मुद्दा दर्ता भएको छ। आपराधिक समूह स्थापना र सञ्चालन गरी
Copyright © 2019 Grace fm 107.6mhz. All Right Reserved.